नेपाल एयरलाइन्स : उडान डिले गर्नेमा विश्वकै नं. १ | NepalDut
नेपाल एयरलाइन्स : उडान डिले गर्नेमा विश्वकै नं. १
विभिन्न कारण देखाउँदै उडानमा ढिलाइ गर्ने गरेका कारण नेपाल एयरलाइन्स धेरैजसो आलोचित भइरहन्छ। तोकिएको समयमा उडान नगर्नेमा अन्य देशको तुलनामा नेपाल एयरलाइन्स मुख्य बन्ने गरेको तथ्यांक बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छ।
हालै हङकङ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले तयार पारेको अन टाइम पर्फमेन्स रिपोर्टमा हङकङका लागि नेपाल एयरलाइन्सको कुनै पनि उडान समयमा नभएको देखिएको छ।
सो रिपोर्टमा देखिएअनुसार गत अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा हङकङका लागि नेपाल एयरलाइन्सको कुनै पनि उडान समयमा भएको छैन। उडान ढिलाइ हुनुमा मुख्यतः ३ वटा कारण देखाइन्छ।